Rosia: Zanaka Lahy Faha-efatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2017 18:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
Iray volana na nihoatra kely lasa izay, nanomboka nanao bilaogy LJ faharoa (voinodel) ilay mpisera voinodel (mpanao gazety Rosiana Vadim Rechkalov) ary nanambara fa hampiasa izany hanoratana “lahatsoratra tsy mandratra” ao. Hatreto, namoaka lahatsoratra indroa tao amin'izany bilaogy vaovao izany i Rechkalov. Ny lahatsoratra voalohany dia momba ny fandevenana ny iray amin'ireo niharam-boina tamin'ny tifitry ny polisy Moskoa izay olona telo farafahakeliny no maty voatifitra tamin'izany tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ao Moskoa tamin'ny volana Aprily; ny lahatsoratra faharoa kosa dia sketch momba ny fianakaviana Chechen iray – ary eto ny dikan-teny:
Zanaka lahy ihany no naterak'i Alaudin sy Fatima. Saingy naniry hanan-janaka vavikely izy ireo, indrindra fa i Alaudin. Tsy takatry ny havana ny ao an-tsain'i Alaudin. Manan-janaka telo lahy taizana ao an-tranony izy, hoy ireo ray aman-dreny, ary maniry vavikely izy.
Monina ao [Grozny], ao amin'ny faritra Tashkal i Alaudin sy Fatima. Ao amin'ny tranobe misy rihana 5 ao amin'ny lalana Zavety Ilyicha. Raha nanomboka ny ady, nitondra ny fianakaviana tany [Nazran] i Alaudin, ary avy eo niverina tao Grozny mba hikarakara ny trano.
Amin'ny alina, zatra mankeny andavarangana i Alaudin. Mifoka sigara sy mijery ny setroka diam-[bala] izy. Nandritra ny tifitra amin'ny balatafondro, dia zatra manidy trano i Alaudin ka midina any amin'ny toby. Indray mandeha, raha nandehandeha tany ivelany izy taorian'ny daroka baomba, nahatazana vehivavy tsy fantany akory sy zazakely nitsirara tamin'ny tany – ts tonga ara-potoana tany amin'ny toby ilay vehivavy. Velona ilay zazakely. Nentin'i Alaudin tany an-trano ilay zazakely, [ary nalana teo ambonin'ny latabatra ao an-dakozia] ny fono tamin'ilay zazakely.
“Mbola zazalahy ihany,” hoy i Alaudin sady nihomehy.
Tahaka izany no nahazoan'i Alaudin sy Fatima ny zanak'izy ireo lahy faha-efatra. Nantsoin'i Alaudin hoe Moris ny anarany, ho fanomezam-boninahitra ilay mpisambotra soavaly ao amin'ny boky ankafiziny [Morris Jerald, ao amin'ny The Headless Horseman nosoratan'i Mayne Reid].
Tsy takatry ny ray aman-drenin'i Alaudin izany. Karazana anarana inona izany-Moris? Tsy tokony antsointsika hoe Maerbek ve izy fa tsy izany….